eNasha.com - आलोकलाई सिमोशले नचाए !
आलोकलाई सिमोशले नचाए !
चर्चित म्युजिक भिडियो निर्देशक आलोक नेम्वाङ अब म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नेछन् । अचम्म लाग्यो ? अचम्म मान्नु पर्दैन । सिमोश सुनुवारले निर्देशन गर्ने अर्जुनकुमार डंगोलको नयाँ गीत 'तिमी छौ साथमा...' मा आलोक नेम्वाङले नाच्ने र अभिनय गर्ने स्वीकृति जनाइसकेका छन् ।
सिमोश सुनुवारले निर्देशन गरेको चलचित्र 'मिसन पैसा'मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेपछि सुनुवारले उनको कलालाई म्युजिक भिडियोमा समेत उपयोग गर्ने भएका हुन् । अभिनयको मामिलामा आलोकले 'नुमाफुङ' चलचित्रमा आफ्नो उत्कृष्टता देखाइसकेका छन् ।
आलोकलाई म्युजिक भिडियोमा मुख्य अभिनेताका रुपमा प्रस्तुत गर्ने सोच कसरी आयो त ? खबर अनुसार एउटै टेबुलमा खाना खाँदै गर्दा अर्जुनकुमारले सिमोशलाई आफ्नो नयाँ भिडियोको प्रस्ताव राखे । सिमोशले पनि यदि आलोकले भिडियोमा नाच्ने भए आफूले भिडियो निर्देशन गर्ने नत्र नगर्ने भने । त्यही बेला गायक अर्जुनकुमार र निर्देशक सिमोशले आलोकलाई दुइतिरबाट च्यापे । दुवैको चेपुवामा परेका आलोकले अन्तिममा 'हुन्छ' भन्नै पर्यो ।
सबैभन्दा रोचक त के छ भने मिसन पैसामा अर्जुनकुमारले करोडपति नेपाली उद्योगपतिको अभिनय समेत गरेका छन् । जसको उनको भागको भूमिका आधा सुटिङ सकिइसकेको छ भने आधा हुन बाँकी छ । यही बेला अर्जुनकुमारले आलोकको अभिनय क्षमता बुझ्न भ्याएका थिए ।
त्यसो त आलोकले म्युजिक भिडियोमा आफ्नो कला देखाएको कुरा नयाँ भने होइन । उनले यसअघि भूषण दाहालले निर्देशन गरेको विधान श्रेष्ठको गीत 'ज्ञानबहादुर छोरो....' मा सानो भूमिका (त्यसमा उनलाई ठम्यायउनै गाह्रो पर्छ) गरेका थिए । त्यस्तै उनले आफैँले निर्देशन गरेको 'लाखौँ पटक मैले कोसिस गरेँ...'मा पनि उनको नृत्यकला देख्न सकिन्छ । तर पूरा अवधिको भिडियोमा उनलाई पहिलो पटक देख्न सकिने चाहिँ यही गीतमा हो । जसको सुटिङ हुन केही शनिबार पर्खिनु पर्ने निर्माण सूत्रले जनाएको छ ।
यता दोस्रो चलचित्र मिसन पैसामा आलोकले सिनेमाका लागि 'आइटम सङ' गर्ने भएका छन् । उनलाई नृत्यमा नायिका मेलिना मानन्धरले सघाउने भएकी छिन् ।
आलोकका बारेमा यति धेरै खबर ? तर पख्नुस्, आलोक भनाइ पनि सुनिहालौँ । भन्छन्- "मेरै सिनेमा वा भिडियोमा आफैँले अभिनय गर्नु मलाई उचित लाग्दैन । भिडियो वा सिनेमा खेल्नु मेरो रहर वा विषय पनि होइन । तर क्षमतावान निर्देशकले मलाई चेपेपछि मैले नाइँ भन्नै सकिनँ ।"
आलोकले हास्यरसमा तुक्का जोडे- "सिमोश सुनुवारसँग त्यो तागत रहेछ, जसले आलोक नेम्वाङलाई समेत नचायो ।"
क्या बात ! सङ्गीतकार लुकेका कुरा रिलिज ट्रयाक बाहिर समुद्रपार कीर्तिमान नेपाली तारा तातोपीरो अवार्ड उपलब्धि भिडन्त विचार पेज थ्री गायक गायिका प्रेम र विवाह रुचि कन्सर्ट हल्ला